हेटौंडा उपमहानगरपालिका ११ नवालपुरका पाँच जना महिलाहरूले समुह बनाएर जुत्ता चप्पल उत्पादन गर्दै आएका छन् । तर आफुहरुले उत्पादन गरेको जुत्ता चप्पलको बजार व्यवस्थापन, प्रचार तथा स्थानिय सरकारको पहल नभएको कारण खिन्नता मानिरहेका छन् । समुहको सदस्यहरु रिता ढुंगाना , सुमित्रा थापा , मिना सुबेदी, भवानी दाहाल र रमा बर्तौलाले रोजगारीको को रूपमा जुत्ता चप्पल बनाउँदै आएका छन् ।
उद्योग बाणिज्य संघ मकवानपुरको सहयोगमा सृजनशिल महिला उद्यमी समुह द्वारा तालिम लिएर जुत्ता चप्पल बनाउँदै आइरहेका छन् । विगत डेढ बर्ष अघिदेखी संचालनमा रहेको उक्त जुत्ता चप्पल उत्पादन केन्द्र मा अल्लो, ढाका, मखमल तथा अन्य कपडाको चप्पल बनाउँदै आएका छन् । महिला, पुरुष तथा बालबालिका सबै ले प्रयोग गर्न मिल्ने जुत्ता चप्पल उत्पादन भइरहेको बताउँदै काम त गरेको तर आफुहरुको सिप बिक्री गर्न नपाएर समस्या भोगिरहेको समुह संचालक रिता ढुंगानाले बाताइन् ।
लकडाउनको कारण आफु हरुले उत्पादन गरेको चप्पलहरु स्टक बस्दा काम गर्ने जाँगर नै हराउन थालेको उनीहरुको भनाइ छ । लकडाउनको समयमा घरमै बसेर बनाइएको जुत्ता चप्पल लकडाउन खुल्ला र बिक्री होला भन्ने आशामा बसिरहेका छन् । लकडाउन नहुँदा पनि खासै बिक्ने थिएन । अहिले त झनै शुन्य भएको छ उनीहरुले भने ।
धेरै महिलाहरु घरायसी काममा मात्र सिमित रहेको कारण हाम्रो समाजमा धेरै दुख भोग्नुपरेको छ । आर्थिक संकट त झनै बढ्दो छ । यस्तै दुख भोगेर स्वावलम्बी बन्ने उदेश्य ले ५ जना महिलाले समाजमा उदाहरणीय पेशा गरिरहेका छन् । तर उचित बजार व्यवस्थापन को अभावको कारण उक्त समुहले उत्पादन गरेको चप्पलहरु केही संख्यामा मात्र बिक्री हुने गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
यसै समुहमा रहेर काम गर्दै आएकी मिना सुबेदी ले सरकारी निकायबाट सहयोग नपाएको दुख व्यक्त गरिन् । उनले भनिन् ः अर्थिक सहयोग पाइयो भने घरेलुु तथा साना उद्योग दर्ता गरेर हामी जस्तै धेरै दिदिबहिनी लाइ रोजगार बनाउन सकिन्छ । तर कतै बाट पनि साथ सहयोग लिन नपाएको कारण मनले हरेष खाने रहेछ । । सिप सिक्यौं तर आर्थिक समस्या का कारण सोचे जसरी काम गर्न नसकिएको मिना ले बताइन् ।
यसै समुहकी अर्की सदस्य सुमिना थापाले भनिन् ः थोरै लगानीमा संचालन गरेका हौं । दिनमा १० देखी १५ जोर सम्म चप्पल उत्पादन भैरहेको मा जेनतेन ३ देखी ५ जोर मात्र बिक्री हुने गरेको छ । स्थानीय तहका सरकारले हामीहरुलाइ सहयोग गर्ने हो भने जिल्लाभर को उत्कृष्ट घरेलु उधोग बनाउने सपना रहेको थापाको भनाइ छ ।
समुहमा आवद्ध रहेर काम गरिरहेका झण्डै २ बर्ष पुग्नलागेको छ । तर स्वदेशी उत्पादनमा नेपाली ले नै विश्वास नगर्ने भएको कारण ले आफुहरुले हातैले बनाएको चप्पल नबिकेको हुन सक्ने उनीहरुको बुझाई छ । बिदेशी उत्पादनले बजार भरिएको छ । उपभोक्ता को नजर बिदेशी जुत्ता चप्पल मै जाने भएकोले सोचेजस्तो बिक्री गर्न नसकिएको उनीहरुले बताए ।
उक्त ब्यवसाय सञ्चालनको लागी ५० हजार सहयोग गरिएको ११ नं वडाअध्यक्ष गोकर्ण पराजुलीले बताए । वडाकै सम्मान योग्य काम भैरहेकोमा आफुले सकेसम्म अझ सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने ः केही समस्या परे वडा कार्यालयमा जानकारी पाइयो भने समाधानको उपाय अवश्य खोजिने छ । बिशेष गरी महिलाको सिपको त झनै सम्मानको साथ प्राथमिकतामा राखिने उनको भनाइ छ ।
यसरी लगनशिलता, मेहेनत र हिम्मतका साथ काम गर्ने महिलाहरु लाई हौसला को आवश्यकता रहेको पाइन्छ । महिला आफैले ५ जना मिलेर एउटा समुह बनाएर उधम थाल्नु भनेको चानचुने कुरा होइन । बजार व्यबस्थापन र अर्थिक सहयोग गर्न सकियो भने जिल्लामा मात्र नभई पुरै देशको नाम रहने छ । स्वदेशी जुत्ता चप्पल उत्पादन बढाउन सकियो भने देशको लागि पनि फाइदा हुन्छ । यस्ता उद्यमी महिलाहरू को सिपको कदर गरेर विभिन्न अवसर को साथै स्थानीय तहबाट सहयोग पाइयो भने मकवानपुर जिल्लाको नाम राख्ने गरी उत्कृष्ट काम गरेर देखाउने उनीहरुले दाबी गरेका छन् ।
सिआन पुर्नस्थापना केन्द्रको राम्रो प्रयास : ४ बर्षमा दियो ९ सय जनालाई उपचार
नेपालमा पहिलो पटक नेपाल रिकभरी अवार्ड-थाहाको चित्लाङमा हुँदै
कोरोना भाइरसको निःशुल्क परीक्षण-उपचार क–कसले पाउँछन् ?
सरकार कोरोना परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिन खोज्यो
कोरोना भाइरसको सक्रिय सङ्क्रमितको संख्या ४० हजार नाघ्यो
माहामारीको बेला पार्टी प्रवेश -खै त स्वास्थ्य सावधानी ?
मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमी १० नम्बर कमिटीद्वारा शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान कार्यक्रम
गीतकार रामकुमार प्रधानको "प्रदेशबाट..म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
बैंकर अधिकारीबाट लिखित “परिवर्तन जीवन यात्रामा” पुस्तक लोकार्पण
आइतबार​, आश्वीन १८ २०७७
चाडपर्वको रौनकता–कोरोनाको छैन डर–दशैं अगावै किनमेल गर्नेको भिड
बिहीबार, आश्वीन १५ २०७७
हाँडिखोलाका अमृत बर्तौला लोकल कुखुरा पालनमा रमाउदैँ